Carsaanyo iyo aalado ku jira dabeecad jacayl ku jirta calaamadda Chicago Bulls | Abuurista khadka tooska ah
Kuwaas Chicago Bulls oo leh Michael Jordan wuxuu noqday NBA Champions, markan ma aysan arkin qalad astaanta naqshadeynta, Taasina waxay ina tusaysaa waxa ay tahay inaanan waligeen sameyn, ama ugu yaraan dib u eegis ku sameeyno naqshadeynta ay tahay inaan siino macmiil.
Laga soo bilaabo shabakadaha bulshada isticmaalaha ayaa dareemay in calaamadda Chicago Bulls, oo rogmatay, ay u muuqato oo lagu daray robot leh xiriir "jacayl" ku soo gal carsaanyo.
Haa ... iyo bilowga way adkaan kartaa in muuqaal ahaan loo aqoonsado, laakiin sawirka waxaad ku arkeysaa robot-ka android-ka oo leh labadiisa indhood, jirkiisa yar iyo labadiisa gacmood sida iyagoo dul saaran carsaanyo sujuudsan. Hagaag, waxaan horeyba u ognahay in male-awaalku uu aad u awood badan yahay, in kastoo xaaladdan oo kale la isku xidhayo dhibco muuqaal ah ...
Hadaad rogo astaanta dibiyada Chicago gadaal waa robot galmo la leh carsaanyo pic.twitter.com/KGfsqyr3Ml
- Xerada Deniz @ SDCC (@MDesaad) September 14, 2019
Markaad aragto calaamadda Chicago Bulls qaabkeeda caadiga ah, in android uusan muuqan haba yaraatee, laakiin dhinaca kale, waxaan haynaa astaanta astaanta u ah ee la waafajiyay sifiican maanta. Laakiin halaag ayaa u ah shabakadaha bulshada iyo malaayiinta qof ee codkooda leh inay soo jiitaan dareenka.
Waxay ahayd Xerada Deniz midka ka soo gala akoonkiisa Twitter-ka ayaa ka dhawaajisay qaylo dhaankan ku saabsan jacaylka u dhexeeya android iyo carsaanyo. Maaha Kaamku kii ugu horreeyay ee qaylo-dhaanta kiciya, maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwa kale oo ka digay aragtidan xiisaha leh.
Waxa ugu xiisaha badan dhammaan waa astaantaas Wuu nala joogaa ilaa 1966. Si kale haddii loo dhigo, waa wax lala yaabo in aanu jirin qof ilaa iyo hadda garawsaday qaladkan weyn ee robot-kaas oo waqti fiican ku leh ereyada jacaylka. Waan arki doonaa haddii ay wax dhacaan, maadaama kooxaha ka soo horjeedaa ay si jees jees ah u sameyn karaan kooxda kubbadda koleyga ee Chicago NBA.
Waxaa jira had iyo jeer fikrado kala duwan koobab sidan oo kale ah, kan ka pornhub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Markaadan waligaa sameyn doonin qalad naqshad sida astaamaha Chicago Bulls